ရွှေဆွဲကြိုးသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း -6နည်းလမ်း | လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ရွှေသည်လှပပြီးစျေးကြီးသောသတ္တုတစ်ချောင်းဖြစ်သော်လည်းအချိန်နှင့်အမျှ၎င်း၏တောက်ပသောအရောင်နှင့်တောက်ပမှုကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ရွှေလက် ၀ တ်ရတနာ - လက်ကောက်နှင့်ဆွဲကြိုး - သည်ညစ်ပတ်ပြီးမှေးမှိန်သွားပြီးချောကျိကျိပြားနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ သူတို့ကအခါအားလျော်စွာသန့်ရှင်းရေးစီစဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လက်ဝတ်ရတနာတွေအတွက်တော့ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကသင့်ကိုကုန်ကျမှာပါ။ ရွှေလက်ဝတ်ရတနာများကိုကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်သန့်ရှင်းနိုင်ပါသလား။
ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ရိုးရာကုစားနည်းဟုသင်ခေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တတ်နိုင်။ ထိရောက်မှုရှိပြီးအလှဆင်မှုကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောပုံစံဖြင့်ယူဆောင်လာနိုင်ကြသည်။
ဆွဲကပ်ထားသောမျက်နှာပြင်နှင့်ထုတ်ကုန်များအပါအ ၀ င်မည်သည့်ရွှေမှမည်သည့်အ ၀ တ်မှမဆိုဆွဲချိတ်များကိုကောင်းမွန်စွာသန့်စင်ပေးသည်။ GOI ငါးပိအပြင်သင်ကသိုးမွှေး၊ အမိုးနီးယား၊ ပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်သွားတိုက်တံတစ်ခွက်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ပထမ ဦး စွာငါးပိကိုခတ်။ ကပ်ပါ။ ဆွဲအားကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှတတ်နိုင်သမျှသုတ်ပါ။
ထို့နောက်အမိုးနီးယား (1 Tsp)၊ သန့်ရှင်းသောရေ (200 ml) နှင့်ဆပ်ပြာ (1 tsp) ၏အဖြေကိုပြင်ဆင်ပါ။
ရှလကာရည်, ကြက်သွန်နှင့်သံပုရာ - ထိရောက်သောရွှေစင်
9% ရှလကာရည် (စားပွဲ (သို့) ပန်းသီး) ဖြင့်ချည်မျှင်ကိုထည့်ပြီးရွှေကိုသုတ်ပါ။ အတူတူလုပ်ဆောင်ချက် ရှလကာရည်ပိုင်ဆိုင်သည် ကြက်သွန် (၎င်း၏ဖျော်ရည်) နှင့်လတ်ဆတ်သော သံပုရာဖျော်ရည်ကို.
သူတို့ကိုသင်စူပါမားကတ်သို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးတွင်အလွယ်တကူဝယ်နိုင်သည်။ ရွှေထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ရန်ပုံငွေများကိုယူပါ။ သူတို့ကအမိုးနီးယားပါလိမ့်မယ် ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာတွင်နူးညံ့သောပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ဖြင့်ကုတ်သို့မဟုတ်ဆွဲသီးကိုဆက်ဆံပါ။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းသည်အလွန်မှိုင်းလာလျှင်၊ ၎င်းကိုအရည်ထဲလုံးလုံးထည့်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရွှေထုတ်လုပ်သူမှညွှန်ကြားသည့်အချိန်အတွက် (ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ထုပ်ပိုးပါ) ။
ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်၌အမိုးနီးယားဆေးဝါးဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းကိုဝယ်ပါ။ 10% သည်သင့်တော်ပါသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကမေ့လျော့လျှင်, ငါတို့မှတ်မိ - ဤအမိုးနီးယားသည်။ ယခင်စာရွက်တွင်ကဲ့သို့သန့်ရှင်းပါ။ ရလဒ်ကတော့ပိုဆိုးသွားမှာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ကုန်ကျစရိတ်လည်းအများကြီးသက်သာလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ် "အဘိုးနည်းလမ်း" - ရွှေကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမလဲ
"ဓာတုဗေဒ" နဲ့စမ်းသပ်ချင်ပါသလား? ဟောင်းနွမ်းသောလမ်းဟောင်းကိုရွှေဆွဲသီးသန့်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဘီယာ၏ 50 ml ကိုတိုင်းတာပါ၊ ကုန်ကြမ်းဥကြက်ဥအနှစ်ကို၎င်းနှင့်အတူထည့်ရန်ထည့်ပါ။ အရောအနှောကိုရိုက်နှက်ပါ၊ ၎င်းတွင်ဝါဂွမ်းသို့မဟုတ်စတုံးကိုထည့်။ အလှဆင်ခြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်သုတ်ပါ။ ထိုအခါသန့်ရှင်းသောရေနှင့်ခြောက်သွေ့သောဆေးကြောပါ။
လက်ဝတ်ရတနာများရောင်းချရန်အလှပြင်ဆိုင်များတွင်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အထူးရွှေစောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများရောင်းချကြသည်။ ဤရွေ့ကားတစ် ဦး ငါးပိသို့မဟုတ်ဂျယ်လ်၏ပုံစံပွန်းစားမှုရေးစပ်သီကုံးကြသည်။ ၎င်းတို့ကိုမြေဖြူတွေသုံးခြင်း၊ မဂ္ဂနီစီယမ်အဖြူ၊ ခဲကာဗွန်နိတ်၊ အနည်ကျကျောက်များ (tripoli)၊ corundum (emery) တို့ပေါင်းစပ်ပြီးရေနံဂျယ်လီ / ဆီကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောရန်ပုံငွေများကသင့်အားရွှေဆွဲကြိုးများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသန့်ရှင်းပေးနိုင်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေသို့ပြန်ရောက်စေခြင်း၊ ပလတ်စတစ်တွင်ပွန်းစားသောအမှုန်များရှိနေသော်လည်း၎င်းသည်ညင်ညင်သာသာနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြုမူသည်။ လက်ဝတ်ရတနာအလှပြင်ဆိုင်များမှရောင်းသူများကလက်ဝတ်ရတနာများသည်ပြတင်းပေါက်မှ“ ဟောင်းနွမ်းသွားပြီ” နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်အသွင်အပြင်ပျောက်ဆုံးသွားပါကရွှေကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ယာယီတက်တူးဘယ်လောက်ကိုင်ထား? သူတို့ရဲ့အမျိုးအစားများနှင့် Application များ၏နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခု
Posted in, ပုံ
24 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,375 စက္ကန့်ကျော် Generate ။